အင်္ဂလန်နိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ရဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ မူဝါဒဆွေးနွေးပွဲမှာ ဗဟိုဘဏ်ရဲ့အတိုးနှုန်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို မနက်ဖြန်ညနေ မြန်မာစံတော်ချိန် ၆နာရီခွဲမှာ ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်. ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ပေါင်စတာလင်ရဲ့တန်ဖိုးကို အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်. ပေါင်စလာလင်ရဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ငွေလဲနှုန်းကို ခန့် မှန်းတွက်ဆနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် traderများအနေနှင့် ထိုသတင်းကို စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်.
ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကို ပြောင်းလဲသွားဖို့ မရှိနိုင်ပေမယ့် ငွေဖောင်းပွမှုတွေနဲ့ ပက်သက်တဲ့ဘဏ်အကြီးအကဲရဲ့ မှတ်ချက်ကတော့အလွန်တရာမှ အရေးပါ အရာရောက်လှပါတယ်. အကယ်၍ ဘဏ်အကြီးအကဲ Mark Carney ရဲ့ ပြောဆိုချက်အရ ဗြိတိန်ရဲ့ စီးပွားရေး ခိုင်မာအားကောင်းတယ်လို့ ဆိုပါက စတာလင်ပေါင် GBPသည် အချိန်တိုအတွင်း တန်ဖိုးမြင့်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်. အကယ်၍ Carneyရဲ့မှတ်ချက်တွေအရ လက်ရှိစီးပွားရေးအလားအလာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြောဆိုမှုမှာ သေချာရေရာခြင်းမရှိပါက စတာလင်ပေါင် GBPသည် အချိန်တိုအတွင်း တန်ဖိုးနိမ့်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ ကံထူးရှင် ၉သန်းမြောက် ရောင်းဝယ်သူကိုကြိုဆိုပါတယ်!
ကံထူးရှင်ကတော့… Rio de Janeiro, ဘရာဇီးမှ Jean Sales De Souza!
ပြားဂဏန်း(ဆင့်) အကောင့် မိုက်ခရို အကောင့် ပုံမှန်(စံ) အကောင့် အကန့်အသတ်မရှိ ECN သုည spread ခွဲခြားခြင်း ပြားဂဏန်း(ဆင့်) အကောင့် MT5 ပုံမှန်(စံ) အကောင့် MT5 ၁၂၃ ဒေါ်လာ Bonus အပိုဆု ၅၀$ အကျိုးတူလုပ်ငန်း